Indoor AP Vagadziri & Vatengesi - China Indoor AP Fekitori
WL8200-X10 chizvarwa chinotevera Wi-Fi 6 yepamusoro-inoshanda bhizinesi Wi-Fi AP (Access Point) yakaburitswa neDCN, inogona kutsigira 802.11ax uye inopa 2.5G Ethernet uplink yekubatanidza. Iine yakakwira mashandiro 6.82Gbps yekuwana bandwidth, WL8200-X10 inotarisirwa kuve nehupamhi hwehuwandu hwevatengi kubatanidza kuendesa zvirinani ruzivo rweWi-Fi mushandisi. Iine indasitiri-inotungamira katatu bhendi gumi nenzvimbo hova, WL8200-X10 ndiyo sarudzo yakanaka yeakakwira-density uye epamusoro-bandwidth mukana wezviitiko senge AR / VR application, 4K ...
DCN WL8200-I3 (R2.0) ibasa repamusoro-soro reWi-Fi AP (Access Point), iyo inogona kutsigira 802.11ac Wave2 uye ichipa kubatana kweGigabit Ethernet uplink. Nenzvimbo yepamusoro 2.9Gbps ​​yekuwana bandwidth, WL8200-I3 (R2.0) inotarisirwa kuve nehukama hwepamusoro hwevatengi kubatanidza kuendesa zvirinani ruzivo rwevashandisi veWi-Fi. Inopa kugona kwakazara kwebasa uye maficha senge kuisirwa zvakapusa, otomatiki AC kuwanikwa uye kugadzirisa, kuvimbika kwakakwirira, chengetedzo yepamusoro, uye chaiyo-nguva manag ...
DCN WL8200-I2 (R2.0) ibhizimusi repamusoro-soro Wi-Fi AP. Iyo inotsigira 802.11ac Wave2 standard uye inopa Gigabit Ethernet kumusoro kwerukova kubatanidza. Iyo yepamusoro yekuwana bandwidth inogona kusvika ku1167Mbps. Inopa kugona kwakazara kwebasa uye maficha senge kuisirwa nyore, otomatiki AC kuwanikwa uye kugadzirisa, kuvimbika kwakakwirira, chengetedzo yepamusoro, uye chaiyo-nguva manejimendi uye kugadzirisa. WL8200-I2 yakanakira mabhizimusi, hurumende uye misika yekugamuchira vaeni. Zvakakosha Zvimiro uye Hi ...
WL8200-I1 ibhizimusi risingadhuri 802.11ac wireless access point (AP) iyo inogona kutsigira 2 × 2 MIMO uye 4 nzvimbo dzenzizi. Inopa kugona kwakazara kwebasa uye maficha senge kuisirwa nyore, otomatiki AC kuwanikwa uye kugadzirisa, kuvimbika kwakakwirira, chengetedzo yepamusoro, uye chaiyo-nguva manejimendi uye kugadzirisa. Zvichienderana ne802.11ac standard, huwandu hwayo hwese hunogona kusvika ku1167Mbps iyo inoshanda kune emaketani emakambani, ekurapa, ekuchengetera zvinhu, ekugadzira, uye ekugadzirisa s ...